१२ बर्षिया छोरीले आमा मेरो महिनावारी किन रोकियो भनेर अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा - समृद्ध नेपाल
नाताले बहिनी पर्ने १२ वर्षीया किशोरीलाई कर णी गरेको अभियोगमा प्रहरीले १९ बर्षीय युवालाई पक्राउ गरेको छ । किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तनहूँ जिल्ला अस्पताल दमौली पठाइएको छ ।
दुई जना नातामा दाजु बहिनी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बेसीशहरले जनाइको छ । प्रहरीका अनुसार जिल्ला अस्पताल लमजुङमा सरका री डा। अहिले नभएको र सुन्दरबजार अस्पतालका डाक्टरले कर णीमा परेकाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे हेर्न तालिम
नलिएकाले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दमौलीस्थित तनहूँ जिल्ला अस्पतालमा पठाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पुनका अनुसार किशोरलाई लमजुङ जिल्ला अदालतबाट १५ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
यस घटनामा संलग्न युवाकी बहिनी र पिडित बालिका साथी हुन् संगै पढने र टिकटक बनाउन भन्दै पिडित बालिका युवाको घरमा जाने गरेकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार घरमा कोही नभएको मौका पारेर किशोरले आफ्नै घर आएकी
अन्तर्वार्ता दिँदादिँदै पक्राउ !
संविधान जारी गर्दा भएको मधेस आन्दोलनका घाइतेको प्रश्न : नेताज्यू, वाचा गरेको ५० लाख खोई ?
कमिसन खायो भन्दै चरित्र हत्या गर्ने काम गर्‍यो -उपाध्यक्ष तामाङ !
ओरालो यात्रामा सुनको भाउ, प्रतितोला ३ सयले घट्यो
उदयपुरका गजेन्द्र कुमार भगतले दिए उधोग बाणिज्य महासंघकाे खुल्ला तर्फ केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी सहयोग गर्न सबैमा अपिल !
नेपालबाट अब विद्यार्थीहरु सिधै अष्ट्रेलियाको एडिलेड आउन पाउने । क्वारेन्टिन पनि हट्यो
सडकमा मागेर खाने युवती यसरी बनिन् संसारकै उत्कृष्ट एक मोडल !
झापामा ५ रुपयामा सादा खाना र १० मा माशु भात खान पाइने !
करोडौ लगानीको महलजत्रो घर, शर्माको घरमा पुग्दा देखियो यस्तो अवस्था,बाबा आमा मात्रै घरमा !
मैले नभएको बाबु कताबाट खोजेर ल्याउनु ?